မျက်နှာလေး ဖွေးဥ သွားစေမယ့် အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်း
January 29, 2022 sonsonlinlin 0
မျက်နှာလေး ဖွေးဥ သွားစေမယ့် အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်း မင်္ဂလာပါနော် ကြည်လင်စိုပြေတဲ့ အသားအရေကို လူတိုင်းလိုချင်ကြပါတယ်မျက်နှာပေါ်မှာရှိတဲ့ အမည်းစက်တွေ၊ ဝက်ခြံကြောင့် ကျန်ခဲ့တဲ့ အမာရွတ်တွေကို သက်သာပျောက်ကင်းစေဖို့ နည်းလမ်းကောင်းတစ်ခုကို မျှဝေပေးချင်ပါတယ်။ ပါဝင်ပစ္စည်း ရှားစောင်းလက်ပတ် ဗီတာမင် E ဆေးအတောင့် ၂- ခု သံလြင္ဆီ ပြုလုပ်နည်း ရှားစောင်းလက်ပတ်အနှစ် စားပွဲတင်ဇွန်း ၁- ဇွန်း၊ ဗီတာမင် E အတောင့် ၂- တောင့်၊ သံလွင်ဆီ စားပွဲတင်ဇွန်း […]
ဆိုင်သွားစရာမလိုတော့ပဲ ဆံပင်လေးတွေကို အိစက်ပြီးပျော့ပျောင်းသွားချင်သူတွေအတွက် သဘာဝနည်းလမ်းလေးပါ ဆိုင်သွားစရာမလိုတော့ပဲ ဆံပင်ကို အိစက်ပြီးပျော့ပျောင်းသွားချင်သူတွေအတွက် သဘာဝနည်းလမ်းလေးပါ ပျက်ဆီးနေတဲ့ဆံသားတွေအတွက် ပြန်လည်အားဖြည့်ပေးမယ် ဆံသားခြောက်တဲ့သူတွေအတွက် အထူးကောင်းတဲ့ နည်းလမ်းလေးပါ ငှက်ပျောသီး တစ်လုံး ၊ ကြက်ဥတစ်လုံး ၊ ပျားရည် ထမင်းစားဇွန်းတစ်ဇွန်းနော် သုံးမျိုးကို ရောချေပြီး ဆံသားကို အရင်းမှ အဖျားထိ လိမ်းပေးလိုက်ပါ တစ်နာရီထိထားလို့ရပါတယ် ခြောက်တဲ့အထိထားလဲရပါတယ်။ပြီးရင် လျှော်နေကျခေါင်းလျှော်ရည်နဲ့ လျှော်လိုက်ရုံပါပဲ ပါဝင်ပစ္စည်းသုံးခုလုံးက သဘာဝပစ္စည်းတွေပဲမို့ ဆိုးကျိုးဖြစ်မှာ ပူစရာမလိုပါဘူးနော် ငှက်ပျောသီးက […]
အသီးအရွက်လေးတွေကို ကြာရှည်ခံအောင် ထားနည်း ဒီတစ်ခါမှာတော့ အသီးအရွက်လေးတွေ ကြာရှည်ခံအောင် ထိမ်းသိမ်းနည်းလေး ဗဟုသုတအနေနဲ့ မျှဝေပေးသွားပါမယ်နော်။ ဒီနည်းက ၁ဝရက်ကနေ ၁၅ရက်လောက်ထိ အထားခံပါတယ်ရှင်..။စျေးကဝယ်လာတဲ့အသီးအရွွက်တွေကို ရေမဆေးသေးဘဲ သတင်းစာ စက္ကူဖြင့် လုံအောင်ထုပ်ပြီး ရေခဲသေတ္တာထဲထည့်သိမ်းထားရင် ပုံမှန် ထက် အထားပိုခံပါတယ်နော်..။ခုလိုအချိန်မျိုးမှာအပြင်ကိုနေ့တိုင်းမသွားသင့် စျေးထွက်မဝယ်သင့်တာမို့ ဒီနည်းလေးက အသုံးဝင်မယ်ထင်ပါတယ်နော်..။ရေခဲသေတ္တာ မရှိတဲ့နေရာမျိုးမှာဆိုသတင်းစာစက္ကူ မသုံးပဲပုဆိုးခြမ်း (သို့)အဝတ်ရေစိုဖြင့် ပတ်ထားပြီး သိမ်းထားလို့ရပါတယ်နော်..။ ရေစိုအဝတ်ဆိုတာက အဝတ်ကိုရေ ရွှဲရွှဲကြီးမဟုတ်ပဲ မစိုမခြောက်လေး ညှစ်ပြီးပတ်ထားဖို့ကိုဆိုလိုတာပါနော်..။ကြက်သွန်ဖြူ/ကြက်သွန်နီ/အာလူး/ ဂျင်း […]
သင့်လက်ကောက်ဝတ်ပေါ်မှာ ဘယ်နှစ်ကြောင်းပါလဲ ပြီးရင် ဘာတွေဖြစ်တတ်သလဲ လက်ဝါးပြင်က လမ်းကြောင်းတွေလိုပဲ လက်ကောက်ဝတ်က လမ်းကြောင်းလေးတွေ ကနေလည်း သင့်ရဲ့ ကံကြမ္မာကို ကောင်းကောင်း သိနိုင်ပါတယ်။ လက္ခဏာပညာ တတ်စရာ မလိုဘဲ အလွယ်တကူနဲ့ လူတိုင်း ကြည့်ြ့ပီးတော့ နားလည်နိုင်တဲ့ နည်းလေးကို သုံးပြီးကံကြမ္မာ တစ်စိတ် တစ်ပိုင်းကို ကျွန်တော်တို့တွေ အခုပဲ ကြည့်လိုက်ရအောင်။ ပုံမှန်ဆိုရင်တော့ သာမန်လူ တစ်ယောက်မှာ လက်ကောက်ဝတ်မှာ လမ်းကြောင်း ၂ ကြောင်း သို့မဟုတ် […]
ဒါ ဆရာ့ အတွက်ယူလာတာဗျ စာမျက်နာ ၅၀၀ပါတဲ့ ကျွန်တော် ရေးထားတဲ့စာအုပ်ပါ ဆရာ”
ပျင်းနေရင် ဒီစာဖတ်လိုက်နော်😊 “တနေ့အရူး တစ်ယောက်ရဲ့လက်ထဲမှာ စာအုပ် တစ်အုပ်ကိုင်ထားတာတွေ့တော့ စိတ် ကျန်းမာရေ ဒေါက်တာ က မေးတယ်။ “လက်ထဲမှာ ဘာကိုင်ထားတာလဲကိုယ့်လူ” အရူး ကပြောတယ် ဒါ ဆရာ့ အတွက်ယူလာတာဗျ စာမျက်နာ ၅၀၀ပါတဲ့📝 ကျွန်တော် ရေးထားတဲ့စာအုပ်ပါ 📔ဆရာ” 👷ဒေါက်တာ ။ ။ “ဟိုက်ရှ်… စာမျက်နာ ၅၀၀ တောင်မှ ဘာတွေ ရေးထားတာလဲကွ”??? 👷အရူး။ ။ “စာမျက်နာ […]
မိမိငွေ အဝင်များ အထွက်နည်းဖို့ ၊လာဘ်ကောင်း၊ လုံခြုံ ၊ကံတက်စေဖို့
မိမိငွေ အဝင်များ အထွက်နည်းဖို့ ၊လာဘ်ကောင်း၊ လုံခြုံ ၊ကံတက်စေဖို့ ငွေကို ပိုက်ဆံအိတ် အံဆွဲမီးခံသေတ္တာ စသည်မှာထားပါတယ် ဒါပေမဲ့…ထားတဲ့နည်းစံနစ် လိုပါတယ်။ မိမိငွေ အဝင်များဖို့ အထွက်နည်းဖို့ လာဘ်ကောင်းဖို့လုံခြုံစိတ်ချဖို့ကံတက်စေဖို့ အဝင်ကောင်း သလိုအထွက်လည်းကောင်းသောနည်းနဲ့သာ ထွက်ဖို့ ..ဖုန်းရွှေFung Shui ပညာက အခုလိုအကြံပြုထားပါတယ်.. ၁။ ကရဝေးရွက် နဲ့အတူထားပါ။ အကျိုးအနာ မပါသော ကရဝေး ရွက် အနည်းဆုံး တစ်ရွက်နဲ့ အတူထားပါ ငွေပွားများ လာစေပါတယ် […]
သုံးရက်အတွင်း ခြေလက်တွေ ဖွေးလာစေချင်တာလား
သုံးရက်အတွင်း ခြေလက်တွေ ဖွေးလာစေချင်တာလား သုံးရက်အတွင်း ခြေလက်တွေ ဖြူဖွေးလာအောင် နှစ်သစ်မှာ ဆေးနည်းသစ်တခုပေးပါရစေသုံးရက်မဟုတ်ဘဲ တစ်ရက်နဲ့ကို သင့်အသားအရေ ထူးခြားလာစေရပါမယ် ။ အထူးသဖြင့် နေလောင်ထားတဲ့ ခြေ၊လက် အသားအရေအတွက် ဒီနည်းက အသုံးဝင်လွန်းစေပါတယ်။ ပျက်ဆီးနေတဲ့ အသားအရေ ပြန်လည် ဖြူဖွေးချင်တယ် ဆိုရင် အဆင့်(၂)ဆင့် ပြုလုပ်ဖို့ လိုပါတယ် ။ ပထမအဆင့်က ဆဲလ်သေတွေ ဖယ်ရှားတဲ့အဆင့်ဖြစ်တယ်။ scrub လို့ ခေါ်ပါတယ်။ ဒုတိယအဆင့်က ခြေလက်တွေ […]
အိုမီခရွန်ရောဂါပိုး ပြည်တွင်းကူးစက်မှုတစ်ရက်တည်း ၇၂ ဦးတွေ့ရှိ မြန်မာနိုင်ငံတွင် အိုမီခရွန်ရောဂါပိုးကူးစက်ခံရသူများအား ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ စစ်ဆေးတွေ့ရှိလျက်ရှိကာ ပိုးတွေ့ရှိသူများမှာ ပြည်ပနိုင်ငံများမှ ကယ်ဆယ်ရေးလေယာဉ်ဖြင့် ပြန်လည်ဝင်ရောက်လာသည့် မြန်မာနိုင်ငံသားများနှင့်နိုင်ငံခြားသားအနည်းငယ်တို့ဖြစ်ကြောင်း အဆိုပါ ဝန်ကြီးဌာန၏ စာရင်းများအရ သိရသည်။ ပြည်တွင်း၌အိုမီခရွန်ရောဂါပိုးကူးစက်ခံရမှုမှာ ပြည်ပမှပြန်လာသူတစ်ဦး၏ မိသားစုဝင်နှစ်ဦးတွင်သာ စစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့ရပြီးနောက် ပြည်တွင်းကူးစက်ခံရမှုမှာထပ်မံစစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့ခြင်းမရှိကြောင်း သိရသည်။ ထိုသို့ ပြည်တွင်းကူးစက်မှုထပ်မံမတွေ့ရှိရသော်လည်း ဇန်နဝါရီ ၂၈ ရက်တွင် အမျိုးသားကျန်းမာရေးဓာတ်ခွဲမှုဆိုင်ရာဌာနတွင် ကိုဗစ်(၁၉)ရောဂါသံသယလူနာများ၏ ဓါတ်ခွဲနမူနာများ ၈၆ ခုအားစစ်ဆေးရာ အိုမီခရွန်ရောဂါပိုး ၇၂ […]
ပွေ့ဖက်တဲ့အခါ ရရှိလာမယ့် ကျန်းမာရေးကောင်းကျိုး(၇)ချက်
ပွေ့ဖက်တဲ့အခါ ရရှိလာမယ့် ကျန်းမာရေးကောင်းကျိုး(၇)ချက် အမေရိကန် မိသားစု အကြံပေး ဆရာဝန် Virginia Satir က ပွေ့ဖက်တဲ့အခါ ရရှိလာမယ့် အကျိုးကျေးဇူးတွေကို ဖော်ပြထား ပါတယ်။ ပွေ့ဖက်ခြင်း ဆိုတာ လူတစ်ယောက်ရဲ့ စိတ်လှုပ်ရှားမှု၊ ပျော်ရွှင်မှု၊ ချစ်ခင်မှု၊ ဝမ်းနည်းမှုတွေကို ပြသတာ ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ပွေ့ဖက်ခြင်းက နွေးထွေးမှုတွေကို ယူဆောင်လာပေး နိုင်ပြီး စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးနဲ့ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေး ကိုပါ […]
ထမင်းစားပြီးနောက် မလုပ်သင့်သည့် အန္တရာယ် ၈ ရပ်
ထမင်းစားပြီးနောက် မလုပ်သင့်သည့် အန္တရာယ် (၈)ရပ် ၁. ဆေးလိပ် မသောက်ပါနှင့်။ ထမင်းစားပြီးနောက် စီးကရက် ၁-လိပ်သောက်ခြင်းသည် သာမန် အချိန် စီးကရက်၁၀-လိပ်သောက်ခြင်းနှင့် ညီ မျှပြီး၊ ကင်ဆာ ရောဂါဖြစ်နိုင်ချေ အလားအလာပိုများကြောင်း ဆေးသိပ္ပံပညာရှင် များက သတိပေးထား သည်။ ၂. သစ်သီးများ အလျင်စလို မစားပါနှင့်။ ထမင်စားပြီးနောက် အချိုပွဲ သစ်သီးစားခြင်းသည် မှားယွင်းသော အစဉ်အလာ တစ်ခုဖြစ်နေကြပါသည်။ အမှန် အားဖြင့် ထမင်းစား […]